Cape yamaGreki, Cyprus: incazelo, ezikhangayo, amaqiniso athakazelisayo kanye nokubuyekeza
Ukuhamba, Izindawo exotic
Intandokazi yizivakashi kuyinto esiqhingini saseKhupro. Omunye zokungcebeleka ezimangalisayo kunazo lesi siqhingi edolobheni Ayia Napa, okuyinto izivakashi ubuhle emangalisayo, evumayo indawo nensada ezihehayo. Ayia Napa itholakala endaweni ethule echwebeni elincane esinqeni Cape yamaGreki, okuyinto iphuzu kakhulu esempumalanga yalesi siqhingi.
Cape yamaGreki (Cyprus) esemgwaqweni phakathi emadolobheni amabili resort Aya Napa futhi Protaras. Nokho, kungaphansi umnyango kaMasipala ka Ayia Napa. Cape ngedolobha Hlukanisa ibanga 7 km kuphela, ngakho izivakashi uya ke, kudingeka ukuba sihlanzeke ngokwenyama uzilungiselele, ngoba umgwaqo kuzothatha okungenani amahora angu-3.5. abahambi abaningi bathatha emabhayisikili entabeni noma Quads uhambe phezu emazombezombe, indlela ngokulambisa ukubonakala kuze kube Cape, ekuthandeni ubuhle landscape zendawo izitshalo endleleni. Cape yamaGreki, eKhupro - omunye ethandwa kakhulu abantu abavakashela.
Endleleni, ukuhamba Ayia Napa zingatholakala bakhangane esiyingqayizivele - "isihlahla oyedwa". Lokhu isihlekehleke somuthi, mhlawumbe kuphela komunye wemithi lokusinda eCape. Ayikho izivakashi engakwazi ukuya esidlule. Eduze bafaka amabhentshi ukuphumula. On the desert emi isihlahla wedwa ubukeka ezithakazelisayo kakhulu futhi olunothile.
Ezincwadini ezehlukene Cape yamaGreki (Cyprus) ibizwa ngokuthi ehlukile. Ngokuvamile isitayela ngesiGreki bokuzisholo Cavo yakhe yamaGreki noma Cape yamaGreki.
Nature Cape yamaGreki ezihlukahlukene ngokumangalisayo ocebile yezimila nezilwane ezihlukahlukene. iphunga olubucayi izimbali nobuhle enhle kangaka iyokhuthaza uhlupho izivakashi kulo lonke uhambo, phakathi kwesikhathi lapho ungabona ezihlukahlukene enkulu imibala, kuhlanganise daffodils ezikhula ngaphandle elangeni elishisa bhe nomhlabathi okunosawoti ngaphandle ukunakekelwa okukhethekile. Ngiyaphupha indawo olunothile - Cape yamaGreki (Cyprus). Incazelo ubuhle wayo obusa izingqondo abaculi abaningi.
Imbali kazwelonke yalesi siqhingi - the Cyprus Cyclamen. Nakuba esiqhingini babo buyakhula lenqwaba zilwane. Imvelo ngokuchichima ocebile imibala ehlukene. Eduze kwezindlu yezakhamuzi zendawo ungahlangana nezihlahla encane, ezinye zazo izimbali zawo ziwukudla engavamile pink izimbali, okuvela kulo kunzima zokudonsa amehlo akho, lesi sitshalo Buginviliya. Cyprus amumethe izitshalo ezimila khona lapho futhi kwenye indawo.
Indawo eyingqayizivele izivakashi Cape yamaGreki. Cyprus - isiqhingi engavamile. Lapha, isimo ekhethekile, futhi eCape yamaGreki, wazizwa acute nakakhulu. Yini kungaba uhlobo sihle esonto ngokumelene bright blue sky ecacile? Omunye ezikhangayo ethandwa kakhulu yilona ibandla Agioi Anargyroi.
engavamile zayo ukuthi itholakala ngqo phezu kwedwala. Futhi ngokumelene isizinda nolwandle oluluhlaza kuphela kubukeka engavamile kakhulu. Le ndawo ibizwa nangokuthi njengoba blue echwebeni. Eceleni nesonto uvame ukuba babuthane abashadikazi uthando sikanye kuzivakashi wakhetha kule ndawo celebration lwabo lomshado. It akunakuphikwa ukuthi lokhu uthando izimpawulo romantic. Ngokuvamile emasontweni ubambe ukucwilisa izingane.
Kodwa hhayi imishado ukuheha abavakashi Cape yamaGreki. Cyprus - ipharadesi bamazwe. Ukuze uthole i-adrenaline kakhulu futhi engakaze ibonwe yenza ngokuphelelwa yithemba izivakashi ethandwa kakhulu ngokuziphonsa emanzini kusukela livulekele ukuphakama 8 amamitha. Kodwa iningi ukuthi akazange awuthole lowo isibindi ngokwazo bagxumela emanzini nje uligqolozele daredevils. Ukuze kwesokunxele izimpawulo, ezansi, ezingeni ukuphakama 2 kwamamitha kuyinto eweni encane ojwayele ukwenza jumping owesifazane noma ababhukudi imfundamakhwela, abangakwazi ingaxazululwa kumuntu ukuphakama enkulu. Nokho, lokhu akukhona neze ukuzijabulisa la madoda okukhulu, namanje uthanda bagxumele ukuze iphuzu esiphezulu eweni, ukubonisa abanye Isibindi nobuqotho babo ngesibindi.
Olwandle kuyinto enzima kakhulu, abaningi ngesikhathi gxuma bafake ukubhukuda izicathulo ekunciphiseni izinhlungu kusukela ekubeni hit izinyawo yamanzi. Kukhona eyehlelayo abantu abangafuni bagxumela emanzini, futhi nje ufuna ukubhukuda futhi uphumule amanzi ogwini zasendle, ekuthandeni ubunjalo bendawo.
Capo yamaGreki Park
Crocus, kanye izinhlobo ezahlukene orchid, kuhlanganise nezinhlobo eziyivelakancane, ezikhulayo "Capo yamaGreki" kule ndawo yokulondoloza imvelo. Lesi siqiwu ihlanganisa indawo enkulu futhi banganikeza izivakashi izinhlobo ezahlukene ukuzijabulisa esiyikhethayo ezisukela izizinda ebabazekayo ophela diving. Lesi siqiwu uye izintaba emizileni, ongakwazi ukuhamba futhi ekhuphukela Cape noma ukugibela ngehhashi noma ibhayisikili, ejabulela emangalisa esikuyo zemvelo. Kukhona epaki kanye nesigcawu wokubuka kanye endaweni yokuphumula, okwenza lonke epaki kujabulise, ukhululekile futhi ongasoze.
Yiqiniso, ngeke akwenze ngaphandle nemiphumela ethile engathandeki ngalo izivakashi kudingeka sibekezelele nge. omunye wabo kuphela ukuthola yesibani, okuyinto ivalwe ezicijile futhi ivale le ndima endaweni olunothile kakhulu. Kukhona esiteshini base amabutho aseBrithani. It is elisoGwini onqenqemeni eweni, kukhona ubuhle kanye ukubukwa emangalisa. Kodwa ngisho ukuwukhipha eCape kungaba isikhathi esikhulu, ngoba kukhona emadokodweni eziningi ezitolo, lapho ungakwazi ukubaleka ukusuka elangeni futhi uphumule izizinda eside.
Le nganekwane we silo kungenye Iphuzu elithakazelisayo lelo, okusenza imibala esikhethekile endaweni futhi edonsela izivakashi eziningi. Kukholakala ukuthi le nganekwane uvela izinganekwane lasendulo, futhi nangokuhambisana silo wakhe uhlala emanzini, kwathi nabomdabu bakule ndawo thanda bakubize ngokuthi "isilo friendly."
Inqola sidlula epaki u-Aphrodite, kuleli qophelo kwepaki ifakwe izimpawu ezikhethekile.
Cape yamaGreki ukuze kakhulu
Nasemihumeni engaphansi kolwandle zitholakala eCape yamaGreki iyindawo ozithandayo esizoheha kakhulu ngakho. Kusukela ezimhlophe isonto elincane Agioi Anargyroi ukuba emihumeni ulwandle cishe 5 imizuzu travel ngemoto noma ATV. Uma uthi nhlá, landscape sasivumela zomile, ngaphandle izici, futhi ukungabakhathaleli nhlobo kwezimila. Kodwa umuntu amane nje ukuya onqenqemeni kanye phambi landscape okuncane siyashintsha at umbono ekhexisayo.
Futhi ku iCape ungabona eminingi ezithinta yokuthi wadala ngokwemvelo, kodwa ngokubheka kubo ubungacabanga ukuthi lokhu umsebenzi umakhi onekhono. Eduze emhumeni kukhona rock ehlukile kuthé phezu kolwandle, abantu bendawo basibiza ngokuthi "ibhuloho abathandi." Lokhu idwala libukeka i lwaleli, kodwa uhlukile ukuthi kwavela olwandle, ngokwezwi nezwi yamba ke. Ngenxa ingozi nolokubhujiswa luhlanganise kwebhuloho itshe akuvumelekile. Kodwa abalandeli okhuthele emidlalweni eyingozi, yebo, uhlobo encane. Beckons lapha ithuba gxuma kwalasha ulwandle ukuphakama enkulu, abaningi babo abenza imilingo kuzuba e isitayela "ukuwa".
Izibuyekezo Cape yamaGreki
Yiziphi izibuyekezo Cape yamaGreki kwesokunxele kuya usivakashele? Izivakashi bathi ubuhle engakaze ibonwe zemvelo, ngokuchichima imibala kanye nekhono uphumule ngemva kokuhamba. Umxhwele ezokungcebeleka yachting emhlabeni emihumeni crystal nasemanzini blue kolwandle, kusale iholidi emnandi. Abavakashi bathi ubuhle elingavamile kwelanga futhi nokushona kungabonwa ngenkathi Cape.
Izivakashi-amateur bezithombe thola lapha isikhala amakghonwabo, ngoba ubuhle obunjalo namanje kuwufanele ngifuna. Arch olwandle, ezihlukahlukene izimila engavamile landscape konke kwenza uhlobo lomsebenzi enezithombe futhi kumnandi ukubuka.
Izibuyekezo ezingezinhle Cape yamaGreki alikho. Lena indawo ezimangalisayo ayinakuqhathaniswa. Qiniseka ukuvakashela Cape yamaGreki. Kusebenta ku itilosi 34 ° 57 '50 4 "N 34 ° 04 '04,5" E.
Aphumula ngosuku lwayo amachibi of Khakassia: kafushane
Iphuzu esiphezulu Urals - Mount Narodnaya
EMecca. Black itshe amaSulumane
Izikhangibavakashi eVietnam ngo-Okthoba - ithuba elikhulu ukuphumula!
I inqaba Genoese e Sudak
Nudist beach eCrimea: igama, ochaza indlela ukuze uthole
Izidakamizwa kwama-hormone: Chi-Klim ukhilimu
Butterfly Umhlaba. Amagama izimvemvane kanye nencazelo yabo
Okutholakele physics yamangqamuzana ezinto eziphilayo.
Thenga Nweba Uphahla lwangaphakathi
Ihhotela "Atlas" Vityazevo: Uhlolojikelele, incazelo kanye nokubuyekeza
Leash-Collar "isilawuli": incazelo, izinzuzo Izibuyekezo
Utshani for namakati - esihlwabusayo futhi unempilo uswidi